Tulobuterol HCL poda (56776-01-3) Vagadziri & Vanotengesa - Fekitori
Tulobuterol HCL (56776-01-3) ndeyenguva yakareba beta2-adrenergic receptor agonist. Tulobuterol inenge isingabatsiri pamubhadha weropa uye kutengesa kwemwoyo uye inonyanya kusarudzira musungo wechechi. Zvinoratidzirwa kuvandudza zviratidzo zvakadai sokuputika kunetseka kunokonzerwa nekudzivirira kwemhepo kwechirwere chechirwere chinonzi bronchial, bronchitis, chronic obstructive pulmonary disease (COPD) uye emphysema.
Tulobuterol HCL (56776-01-3) Tsanangudzo
Tulobuterol HCL (56776-01-3) ndeyenguva yakareba beta2-adrenergic receptor agonist. Tulobuterol inenge isingabatsiri pamubhadha weropa uye kutengesa kwemwoyo uye inonyanya kusarudzira musungo wechechi. Zvinoratidzirwa kuvandudza zviratidzo zvakadai sokuputika kunetseka kunokonzerwa nekudzivirira kwemhepo kwechirwere chechirwere chinonzi bronchial, bronchitis, chronic obstructive pulmonary disease (COPD) uye emphysema. Matambudziko makuru akaonekwa aive: kudengenyeka, palpitations uye serum potassium inoderera.
Kemikari Name 2- (tert-Butylamino) -1- (2-chlorophenyl) ethanol hydrochloride
muchiso Name Tulobuterol Hydrochloride
Kirasi yeMishonga beta2-adrenergic receptor agonist
Molecular Wsere 264.19
Kunyorera Point 159-164 ° C
Boiling Point 338.2 ° C pa 760 mmHg
APane Tulobuterol HCL ndeyenguva yakareba beta2-adrenergic receptor agonist.